Azonao atao izao ny mividy ny Casio Pro Trek WSD-F20, smartwatch ivelan'ny lalana miaraka amin'ny Android Wear 2.0 | Androidsis
Ny famantaranandro marani-tsaina dia nifandray tamin'ny voalohany fanaraha-maso ny asa ara-batana, fa amin'ny tranga Casio Pro Trek dia tsy hanana ahiahy momba izany ianao, satria ny endriny sy ny endriny dia noheverina ho an'ireo tia fanatanjahantena faran'izay henjana indrindra.
Tsy toy ny mpanamboatra famantaranandro mahazatra izay nitaingina tsena smartwatch niaraka tamin'ny maodely premium sy akanjo azo tsapain-tanana, Nanapa-kevitra ny handray fomba hafa i Casio, satria ny fitaovana vaovaony dia ny fitohizan'ny andian-dahatsoratra izay nanomboka 5 taona lasa izay, miaraka amin'ilay hany voalaza fa tamin'izany fotoana izany dia tsy dia nisy resaka firy famantaranandro marani-tsaina.
Ny Casio Pro Trek dia nambara voalohany tao amin'ny CES 2017. Betsaka ny antsipiriany manandanja toy ny vidin'ny fividianana na daty ahazoana tsy navoaka tamin'io fotoana io, fa izao, 3 volana aty aoriana, efa namidy ihany ilay gadget.
Amin'ny anarana feno Casio Pro Trek WSD-F20, ny smartwatch izay hita amin'ny sary etsy ambony dia tonga efa voapetraka miaraka Android Wear 2.0 ary mety hiasa mahagaga izany ho an'ireo izay tia hetsika voajanahary. Tsy misy hanakana anao tsy hitondra azy any amin'ny gym, fa ny endriny toa mety kokoa amin'ny tontolo voajanahary, toy ny ala, tendrombohitra, sns.
Mikasika ny fikirakirana ny fitaovana, mitondra ny Casio Pro Trek WSD-F20 vaovao Mari-pahaizana MIL-STD-801G (tsy misy rano hatramin'ny 50 metatra ny halaliny) sy a fampiasa ambany fantsona GPS sensor angovo izay handray an-tsoratra tsy misy olana ny làlambe rehetra nalehanao nefa tsy nampiasa smartphone.
Amin'ny alalan'ny Sarintany, ny sarintanin'ny lalanao dia azo sintonina mialoha hampiasana azy mivantana amin'ny fiambenana amin'ny alàlan'ny fifandraisana Internet finday. Ary koa, noho ny fiantsoana antsoina hoe Fahatsiarovana ny toerana, ny WSD-F20 dia hanampy anao hitahiry haingana ireo toerana mahaliana indrindra hitanao teny an-dalana. Ilaina io, ohatra, ho an'ireo mpaka sary izay mizaha toetra ny natiora amin'ny fikarohana toerana vaovao alohan'ny handehanany sary azy ireo.
Ny Casio Pro Trek WSD-F20 vaovao dia azo vidiana izao tranokalan'ny mpanamboatra miaraka amin'ny vidiny 500 dolara, na dia mety hahatratra magazay manokana eto amintsika amin'ny herinandro ho avy aza izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Azonao atao izao ny mividy ny Casio Pro Trek WSD-F20, smartwatch amin'ny faritra rehetra miaraka amin'ny Android Wear 2.0
Xiaomi dia hitohy tsy hivarotra ny vokatra any Etazonia na Eoropa
Google dia hanolotra hevitra voadika momba ny trano fisakafoanana sy toerana mahaliana